Faakiyuum-garee dhiqlaha - Let's Beat the Bed Bug!
Public Facilities Resources You are here: Home / Faakiyuum-garee dhiqlahaFaakiyuum-garee dhiqlaha Español English Hmoob اللغة العربية Faakiyuum-garee dhiqlaha (.pdf)
Faakiyuumintu way caawisaa la dagaalanka dhiqlaha marka lala beegsado goobaha uu koox kooxda ugu dhuunto taasina waxay yaraysaa tidadiisa. Hase yeeshee faakiyuumintu ma dabargoyso dhiqlaha boqolkiiba boqol. Waxa jira talaabooyin muhiim ah oo aad u baahantahay inaad qaadid marka aad faakiyuumka u isticimaalaysid la dagaalanka dhiqlaha. Taasi oo kuu saamaxaysa inaad faakiyuumka la beegsatid meelaha uu ku tirada badanyahay dhiqluhu oo aad wax badan mar keliya ugu soo nuugtid adiga oo aan aqalka kusii firdhin oo kusii faafinin. Soo nuugidu waa inay ahaataa mid awood badan leh. Isticimaal tuubada faakiyuumka la socota oo sii dheeree hadii aad u baahatid. Ogoowse dhqlihu mar marka qaarkood tuubada afkeeda, qararka iyo maryaha ama dunta ayuu kusii dhegaa oo ka lushaa, sidaas darteed ka hubi meelahaas in aan waxba ku hadhin ama ku dhuuman. Waxa suurtagal ah in mar marka qaarkood ay hawada faakiyuumku firdhiso ugxanta dhiqlaha oo aanad ku qaqabanin faakiyuumka cayayaankan.
Marka aad dhamaysid faakiyuumka, ka saar kiishka ama baga oo isla markiiba afka koolada warqada ah kaga dahaadh. Kadibna kusii dhex rid bacda qashininka oo mar kale afka si adag uga sii xidh markaana qashinka ku tuur. Dhiqluhu wuu ku dhex noolaan karaa baaga fakiyuumka iyo xataa tuubooyinkiisa. Hadii aanu fakiyuumku ahayn ka baaga leh, isla markiiba bac ku af gembi qashinka oo afka ka adkee kadibna qashinka ku ridn adiga oo isla markiiba biyo saabuun leh ku maydhaya koobka faakiyuumka si wixii ku hadhay ay halkaasi ugu dhintaan. Wuxu inta badan leeyahay filtarka ama tuubada yare e gunta kaga taala faakiyuumka aan baaga lahayni, sidaas darteed waa in la maydho ama la qaboojiyo filtarkaasna hadiikalena la tuuro kadibna aad filtar kale iibsatid. Hadii aad fakiyuumkaas u isticimaalaysid qolkale, fadlan tuubada afka kadhaadh intaad faakiyuum garaynaysid si aan dhiqle ugasoo bixin kadibna marka aad dhamayso sidii hore oo kale u tuur. Faakiyuumin ku cel celis ahi lagama maarmaan ayay u tahay la dagaalanka dhiqluha iyo xakamayntiisa. Xusuusnoow goobahii aad ku aragtay dhiqlaha oo ku cel celi faakiyuumka. Ugxantu inta badan sidii xabag oo kale ayay ugu dhegtaa geesaha markaa way adagtahay sida looga fujiyo ama looga gooyo. Dhiqlaha waayeelka ahi wuxu had iyo goor doontaa meelaha uu ku dhuuman karo markaa had iyo jeer ka eeg meelihii aad hore ugu aragtay oo faakiyuum-garee mar walba si aad dhiqlaha uga yaraysid aqalkaaga.
Isticimaal talaabooyinka aan u baahnayn kiimikada sida kulaylka, qaboojinta, dhar dhaqida iyo wixii la mid ah si aad u yaraysid dhiqlaha. Siyaabahan waxad kaga hawl yaraysanaysaa faakiyuum-garaynta oo ah hawl shaqo badan u baahan. Talaabooyinkan oo dhami waxay ka mid yihiin ladagaalanka dhiqlaha.
Isku day in nawaaxiga fadhigaagu yahay meel ay alaabtu khafiif ku tahay waayo hadii dhiqle aqalka galo wuxuu helayaa meelo badan oo uu ku dhuuman karo. Shayada nadiifta ah ku rid ama ku xidhxidh baco si ay kaaga yaraadaan meelaha u baahan in la faakiyuum-gareeyo. Faakiyuum-garee dhiqlaha (.pdf)